Imibiko Yokwenzeka E-UAE | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Imibiko engenzeka e-UAE
Ngabe ufuna ukubona ukuthi ukusakaza okusha kwemali noma imodeli yebhizinisi kuzokusebenzela? Yebo, kulapho umbiko owenzekile uzofezeka khona. Imibiko yokwenzeka ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ongazenza ukuze ubone ukuthi ngabe okuthile kulifanele ibhizinisi lakho. Nakhu konke okudingeka wazi ngakho.
Iyini imibiko yokwenzeka?
Ukuqagelwa Kwezezimali kubandakanya izimo ezingcono kakhulu nezimbi kakhulu
Lokhu kungumbiko ogcwele ukubalwa futhi uzokutshela izinketho ezahlukene ongakhetha kuzo. Kukhona njalo izinsiza ezinomkhawulo ongasebenza ngazo nombiko wokuokwenzeka uzokutshela indlela engcono kakhulu ongasebenzisa ngayo leyo minikelo ekhawulelwe yephrojekthi yakho.
Kodwa-ke, ngaphambi kwalo mbiko kuza ucwaningo olunokwenzeka. Lokhu kuhlola kwephrojekthi ohlose ukulenza. Ucwaningo luhlose kumbuzo owodwa kuphela: Ngabe le projekthi kungenzeka? Uzobe usuphendula lo mbuzo ngezindlela ezahlukahlukene futhi uma ngabe uhlelo lwangempela lwehlulekile kuzofanela uqhamuke necebo elisha.
Ngamafuphi, itshela inkampani ukuthi kufanele baphume neprojekthi ethile noma cha. Uma isifundo sesenziwe, umbiko ulungiselelwe bese kuba isiphakamiso sokugcina.
Ukuhlola ukusebenza kwephrojekthi noma ibhizinisi elivele likhona
Ukuhlaziywa okungenzeka kuyindlela yokuhlola ukusebenza kwephrojekthi noma ibhizinisi. Ngaphambi kokuthi ibhizinisi lifake isikhathi nemali lifake iphrojekthi, bazodinga ukuqonda ukuthi lingahle liphumelele kangakanani iphrojekthi ngaphambi kokutshala imali.
Yini okufanele ucabangele lapho kwakhiwa izifundo / imibiko eyenzeka?
Ngenkathi senza izinqumo nsuku zonke, abathatha izinqumo abatshala isikhathi nemali yabo kumaphrojekthi kudingeka baqonde ukuthi kungani kufanele bahambe nenketho. Umbiko uhlinzeka ngokuhlaziywa okuningiliziwe okusiza ekucabangeni izinketho eziningi kunephrojekthi yasekuqaleni. Nakhu okudingeka ucabangele lapho wenza ucwaningo / umbiko onokwenzeka:
Udinga ukudala ucwaningo ngendlela yokuthi noma ngabe ngubani okuhloswe ngalo ukuluqonda. Izikhathi eziningi abantu bafuna ukuthi ucwaningo lususelwe ezinhlosweni zebhizinisi nekusasa labo. Lokhu kubasiza bazi ukuthi kufanelekile ukutshala isikhathi nemali. Kufanele wenze ucwaningo luhambisane nokusebenzisa ushintsho ofuna ukulibona ngokuzayo.
Amaqiniso nedatha kwenza umbiko wakho ube bulletproof. Umbiko wakho kufanele uthembeke futhi idatha izokunikeza ngalokho. Udinga imininingwane nemithombo ethembekile yokuxhasa isimangalo sakho.
Ukuqonda ezinye izindlela
Qonda indlela ezinye izindlela zakho eziqhathaniswa ngayo nohlelo lwakho lwangempela olususelwa kumaqiniso nezibalo. Kubalulekile ukuthi futhi uphethe ezinye izindlela. Lokhu kuzokwenza inketho yakho ibukeke ihlukile futhi izilaleli zakho zingenza kalula ukuziqhathanisa. Badinga ukubona ukuthi kungani ukukhetha kwakho kuhamba phambili.
Umehluko phakathi kweThemu lokuTadisha kanye noHlelo lwebhizinisi
Sesivele sazi ukuthi luyini ucwaningo lokuthi kungenzeka futhi siyaluqhuba ngaphambi kokwenza uhlelo lwebhizinisi. Uhlelo lwebhizinisi lwakhiwa uma ithuba selikhethiwe futhi lwakhiwa. Uhlelo lwebhizinisi luqokomisa ukukhula nokuqina kwebhizinisi okwamanje, ukufundwa okungenzeka kungenzeka kuthuthukiswa ngaphambi kokubona ukusebenza kwebhizinisi.
Izizathu ezinhlanu zokuthi kungani udinga ukwenza ucwaningo lokuokwenzeka
Isiza ukusula nokuchaza izinhloso
Isiza ekwakheni uhlelo lwebhizinisi
Isiza ekwenzeni uhlelo
Siza uthole ukuthi isicelo sakho sisebenza kangakanani
Siza uqonde izithameli eziqondiwe
Ungakha ucwaningo lokuthi kungenzeka kunoma iyiphi iprojekthi noma iphrojekthi. Kuzokusiza ukuthi uhlaziye umqondo wakho futhi uthole ezinye izinketho. Ngaphandle kokutadisha okungenzeka futhi ubike inzuzo yakho ngeke iqhubekele phambili noma ingabhekana nobunzima besikhathi esizayo.
Letha i-Business Idea yakho eMakethe ye-UAE
Ukuhlolwa Kwemakethe kufaka phakathi ukubuka konke kwezimboni kanye nezidingo zemakethe okuqondiwe